The Rohingya News Bank : NGO
BDCSO to UN: Do not undermine local NGOs in Rohingya response
They also said the UN should limit its role only to monitoring and technical assistance in the Rohingya response
They also said the UN should limit its role only to monitoring and technical assistance in the Rohingya response.
Labels: 2020, BDCSO, en, News, NGO, Rohingya
UN and other aid agencies are concerned that the monsoon will exacerbate an already precarious situation in the Rohingya camps where almost 860,000 refugees live in overcrowded conditions, many situated in hazardous terrain.
The monsoon, with heavy rains in the past few days, brings contamination of drinking water sources and raises increased risk of water-borne disease outbreaks in the camps and adjacent Bangladeshi communities, on top of the Covid-19 pandemic, they said.
Labels: 2020, Covid-19, en, ISCG, Monsson, News, NGO, Rohingya Refugee Camps, UN
Dr Wan Azizah: US$50m Qatari donation for Rohingya went through NGOs, not Pakatan government
Wednesday, 29 Apr 2020 BY EMMANUEL SANTA MARIA CHIN
Formey deputy prime minister Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail said the Qatari donation was made out by the Qatar Charity (QC) to the NGOs involved and not through the government. — Picture by Firdaus Latif
KUALA LUMPUR, April 29 — Former deputy prime minister Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail today responded to the Umno president who questioned how US$50 million (RM218million) in donations for the Rohingya community here was used.
In response toaFacebook post by Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yesterday, Dr Wan Azizah pointed out that the Qatari donation was made out by the Qatar Charity (QC) to the NGOs involved and not through the government.
Labels: 2020, Donation, Dr.Wan Azizah, en, News, NGO, Qatar, Rohingya
အကူအညီပေးရေးနှစ်ဖွဲ့ကို ရိုဟင်ဂျာစခန်း လုပ်ခွင့်ပိတ်
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေး လက်မခံကြဖို့ တိုက်တွန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အာဏာပိုင်တွေက လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပိတ်လိုက်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်က စီစဉ်ခဲ့တဲ့ နေရပ်ပြန်ပို့ရေး အစီအစဉ် မအောင်မမြင် ဖြစ်အောင် သွေးထိုးပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ အမေရိကန် အခြေစိုက် Adventist ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ အကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီ (ADRA) နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အခြေစိုက် Al Markazul Islami အဖွဲ့တို့ကို လုပ်ငန်းလုပ်ခွင့် ပိတ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ဒုက္ခသည်စခန်းတွေရှိရာ Cox's Bazar ဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Kamal Hossain ကို ကိုးကားပြီး AFP သတင်းက ဖော်ပြခဲ့တာပါ။
Labels: 2019, mm, NGO, ဒုက္ခသည်စခန်း, ရပ်ဆိုင်း, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, အကူအညီ
Bangladesh bars 41 NGOs from undertaking any activity in Cox's Bazar Rohingya Camps
The Government of Bangladesh has barred 41 NGOs from undertaking any activity in Cox's Bazar Rohingya Camps for their alleged wrongdoings.
This was announced today by Foreign Minister Dr AK Abdul Momen in Sylhet. He said A total of 139 NGOs have been operating in the Rohingya camps since the refugee crisis began in August 2017.
Labels: 2019, Cox's Bazar, Dr AK Abdul Momen, en, News, NGO, Rally, Rohingya Camp
Regulator waiting for ground info before looking into ‘NGO conspiracy’ over Rohingya return
The director general of the Bureau of NGO Affairs that regulates non-government organisations in Bangladesh is waiting for the ground information to look into the possible link of NGOs with the botched attempt on Rohingya repatriation on Aug 22.
“I am waiting for their information on what really happened there. After getting their information, we will take the next step,” KM Abdus Salam said when asked about the matter atadialogue in Dhaka on Tuesday.
Labels: 2019, en, News, NGO, Rohingya Retrun
မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေဆွေးနွေး
မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဘယ်လိုအရေး ယူဆောင်ရွက်သင့်လဲ ဆိုတဲ့အကြောင်း ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ဂျာမဏီ၊ ပီရူးနဲ့ ကူဝိတ်နိုင်ငံတို့ ကမကထပြုလုပ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်တွေက မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ နိုင်ငံတကာ NGO တွေနဲ့အတူ နယူးယောက်မြို့က ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာ မနေ့ နေ့လယ်က ဆွေးနွေး ကြပါတယ်။
Labels: 2019, Dr.Wakar Uddin, FFM, mm, NGO, ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေး, သတင်း
Lawyer's Sincere Move Yields Good Results For Rohingya Children.
By Nurhanani binti Basri & Noraizura Ahmad
KUALA LUMPUR (Bernama) -- In the beginning, neither the teacher nor pupil could comprehend each other but now,ayear later, some 100 children of Rohingya refugees in Seri Kembangan, Selangor, have learnt to speak decent Bahasa Malaysia.
Labels: 2019, Bernama, en, Myanmar, News, NGO, Ramadan, Rohingya, Rohingya Children, Rohingya Refugee
In Rohingya camps,apolitical awakening facesabacklash.
Reporting by, Simon Lewis, Poppy McPherson, Ruma Paul
Mohib Ullah,aleader of Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights, is seen in his office in Kutupalong camp in Cox's Bazar, Bangladesh April 7, 2019. Picture taken April 7, 2019. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Labels: 2019, ARSA, Bangladesh, BRAC, Cox's Bazar, en, Harakah al-Yaqin, Kutupalong camp, Myanmar Military, News, NGO, Reuters, Rohingya, UN Refugee Agency
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲပေါင်းတစ်ရာကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း သမ္မတရုံးပြော
ရခိုင့်တပ်မတော် AA နဲ့ အစိုးရတပ်မတော်ကြား ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလကနေ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့အထိ တိုက် ပွဲပေါင်းတစ်ရာကျော်၊ မိုင်းပေါက်ကွဲမှု ၄၄ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မ တ ရုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဦးဇော်ဌေးက ပြောလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, NGO, ပဋိပက္ခ, မြစ်ဆုံစီမံကိန်း, ဦးဇော်ဌေး
Quick, safe repatriation of Rohingyas stressed.
Speakers atadiscussion yesterday called upon the international community to take immediate steps towards repatriation of Rohingya refugees.
They acknowledged plight of the refugees and highlighted the importance of ensuring their return to Myanmar with dignity and safety.
Labels: 2019, en, News, NGO, Repatriation, Rohingya, The Daily Star, UN
Bhashan Char ကျွန်း ပြောင်းမယ့်အရေး ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေ ရတက်မအေး
မဆုမွန် ၊ 22 မတ်၊ 2019
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ Cox's Bazar ခရိုင် Kutupalong ဒုက္ခသည်စခန်း ဈေးကနေ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီး ပြန်လာစဉ် (နိုဝင်ဘာ၊ ၂၁၊ ၂၀၁၇)
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေကို Bhashan Char ကျွန်းပေါ် ပြောင်းရွှေ့ပေးမယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ အစီအစ ဉ်အပေါ် ကုလသမဂ္ဂ အကြီးတန်း အရာရှိတဦးက ကြိုဆိုလိုက်ပေမဲ့၊ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ဖို့ လိုတဲ့အကြောင်း ပြောဆိုလိုက်တဲ့အပေါ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် ဘယ်ဒုက္ခသည်ကမှ သူတို့အတွက် အ သက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ကျွန်းပေါ် မပြောင်းရွှေ့ကြလိုဘူးလို့ တုန့်ပြန် ပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အစားအသောက်နေထိုင်မှုတွေ စီစဉ်ထားပေးမယ်လို့ဆိုပေမဲ့ အသက်ဘေးရန်ကြောက်လို့ မြန်မာပြည်က ထွက်ပြေးလာကြတဲ့သူတို့အတွက် ဘေးထပ်ဖြစ်နိုင်မယ့် နေရာကို မသွားလိုကြသလို လူသားတဦးချင်းစီရဲ့ လူ့တန်ဖိုးကို လေးစားစေလိုပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မဆုမွန်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
Labels: 2019, Bhashan Char Island, Cox's Bazar, Dhaka, Kutupalong, mm, NGO, Yanghee Lee, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ
Wednesday, "March 13, 2019"
Labels: 2019, Bill, en, Hotel, News, NGO
Bangladesh highlights Turkey's humanitarian aid to Rohingya refugees.
ANKARA | 23.02.2019
Rohingya refugees walk towards the Balukhali refugee camp after crossing the border in Bangladesh’s Ukhia district, Nov. 2, 2017.
Bangladesh has highlighted Turkey's and the country's nongovernmental organizations' (NGOs) extensive humanitarian aid to hundreds of thousands of Myanmar's Rohingya Muslims who took shelter in the country, fleeing from persecution in their homeland.
Labels: 2019, Allama Siddiki, Bangladesh, en, General Assembly, News, NGO, OIC, Refugee, Rohingya, Rohingya Crisis, Turkey, UN
Published at February 18th, 2019
Bangladesh is currently sheltering over 1.1 million Rohingyas inanumberof refugee camps in Cox’s Bazar Syed Zakir Hossain/Dhaka Tribune
UN aid agencies and NGO partners have appealed for raising $920 million to meet the massive needs of the refugees and over 330,000 members of vulnerable host communities
A quarter of the $920-million Joint Response Plan (JRP) launched in Geneva last Friday to tackle the ongoing Rohingya crisis this year has been allocated for the host communities in Cox’s Bazar.
Labels: 2019, Cox's Bazar, Donor, en, JRP, News, NGO, Refugee, Rohingya, UN